Igumbi elitofotofo elineebhedi ezi-3 elinegumbi lokuhlambela. Ukupaka
Czarna Górna, Podkarpackie, Poland
Igumbi lakho lokulala e iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) sinombuki zindwendwe onguAgnieszka
Indawo ekhululekileyo yokuhlala okufutshane kunye nexesha elide, embindini kanye, "idolophu" engqongwe ziindawo eziluhlaza. Iphuzu eligqibeleleyo ekudibaneni kwe-Bieszczady Loops enkulu kunye neNcinci, kufuphi neentaba kunye ne-Solina reservoir. Kwindawo ekufutshane kukho i-bistro, ikhemesti, i-ATM, indawo yolwazi. umkhenkethi, (indawo yokuqubha yangaphakathi nangaphandle ekufutshane malunga ne-1km), iindlela zokuhamba, i-Post Office Pl. isikhululo sepetroli, iivenkile, I nPost. Ukupaka, i-grill kwikona eluhlaza, izibonda zokuhamba ze-Nordic, i-wi-fi, i-breakfasts 30 PLN / umntu. Siyakumema :)
Sinikezela ngegumbi elikhulu labantu aba-3 elinendawo emalunga ne-35 m2 enegumbi lokuhlambela. (indlu yeshawari, isitya sokuhlambela, indlu yangasese). Eli gumbi mayixhotyiswe ifriji, ngeketile yombane, iseti izitya namacephe, isomisi seenwele, iitawuli, nelinen ukhuko (kunye iingubo kunye kwimiqamelo), iphepha langasese, isepha engamanzi ... (kwi isimbo Bieszczady) i kwikona komoya: iploti ene-grill, indawo yokutya, ukuphumla. Sinikezela ngeepali zokuHamba zeNordic, iWi-Fi, indawo yokupaka ngokubeka iliso ecaleni kwendawo. Kukwakho nendawo yekhemesti kunye nebistro kwindawo yethu. Sikumema ngobubele. Izilwanyana zasekhaya nazo zilungile, kwaye zamkelekile kakhulu :)
Idolophu yabakhenkethi eluhlaza kodwa esezidolophini, ebekwe ekudibaneni kwe-Wielka kunye ne-Mała Bieszczadzka Loops. Iivenkile ezininzi, iivenkile zegastro, iburger, ikhemesti, iindawo ezininzi zenkonzo, iATM, ivenkile yokulungisa iimoto. isikhululo sepetroli, iPosi yasePoland, iCawa yamaOthodoki ... Ubuninzi bezityalo eziluhlaza, amahlathi, iindlela. Sibekwe embindini, kodwa ngasemva kwendlu kukho indawo eluhlaza kunye nebarbecue efumaneka kwiindwendwe :) Wamkelekile :)
Umbuki zindwendwe ngu- Agnieszka